Photoshop CC dia hamela anao hahita sy hisafidy zavatra misy tsindry tokana | Famoronana an-tserasera
Mahaliana izany ny fomba fivoaran'ny Photoshop ka isan-taona dia mahita fanatsarana miharihary isika, ahafahantsika mitahiry ireo asa izay mety haharitra minitra vitsivitsy na ora maromaro mihitsy aza. Io no ananan'ny teknolojia ankehitriny. Noho izany, mahaliana fa mitandrina ny fanavaozana ny programa toa ny Adobe isika.
Amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra fiasa vaovao ho an'ny fitaovana Photoshop marani-tsaina izany hoe afaka mamantatra zavatra amin'ny tsindry tokana. Adobe io izay namoaka horonan-tsary mampiseho ny fomba fiasan'ilay fitaovana fisafidianana vaovao ary ho avy tsy ho ela ao amin'ny Photoshop CC. Antsoina hoe "Select Subject", na taranja voafantina, ary mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy sy fianarana milina Adobe Sensei hahagaga antsika tanteraka.
Araka ny efa nolazainay tamin'ny fiandohan'ny lahatsoratra dia tonga izany mitsitsia fotoana be dia be aminay amin'ny asa fanaingoana na fisafidianana zavatra izay azontsika atao amin'ny sehatra iray. Ny fanovana sary dia ho lasa zavatra haingana kokoa amin'ity zava-baovao ity izay mampiasa milina fianarana sy faharanitan-tsaina artifisialy; fironana roa ankehitriny amin'ny karazana programa sy serivisy.
Amin'ireny fotoana ireny rehefa mampiasa ny lasso amin'ny Photoshop isika dia afaka ampiasao Safidio ny sujet ka tsindrio iray monja safidio tanteraka ilay sary amin'ny sary. Tsara kokoa raha mijery ianao, satria tao amin'ilay horonan-tsary dia saika nahaliana antsika ny fandrosoana tamin'io lafiny io izay nataon'i Adobe.
Azonao atao miasa miaraka amin'ireo zavatra tokana sy vitsivitsy, ary miasa tsara mba hisafidianana ny zavatra akaiky indrindra hamela ny ao ambadiky ny famindram-pontsika hanatanteraka ny karazana fanovana rehetra; zavatra nampianarintsika vao tsy ela akory tato amin'ity lesona ity.
Fandaharana iray mivoatra amin'ny fomba toy izany dia hahatonga ilay hevitra hanana lanjany bebe kokoa amin'ny ho avy hamorona, noho ny fizotran'ny fanatanterahana azy. Ny majika dia hataon'i Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Fitaovana maranitra vaovao Photoshop CC dia mamantatra ireo zavatra misy tsindry iray